Indawo yokuhlala yaseDorothea
I-villa entsha eyakhiwe ngokuthe ngqo kwiLake Starnberg ngaphandle kweSeeshaupt. Indlela emfutshane eya kwipropathi yakho yechibi kunye ne-jetty kunye ne-boathouse.
Ijikelezwe ziivillas ezintle zokujika-kwinkulungwane kunye nemithi emidala.
Amagumbi aqaqambileyo, amakhulu aqhelekileyo kumgangatho ophantsi, amagumbi amancinci amaninzi aneefestile ezisezantsi ukuya kwisilingi kumgangatho ongaphezulu kunye neefestile ezi-2 zokuhlala ezipholileyo. Ilungele iintsapho ezimbini, iinqwelomoya ezimbini zokunyuka kwiindawo ezahlukeneyo.
Indawo entle yeattic,
Igumbi letafile, igumbi lebhola ekhatywayo, i-sauna.
Indlu isando kugqitywa. Senze iinzame zokudala umoya wekhaya. Sicebe ikhitshi elikhulu kakhulu ukuze kuphekwe nokutya kunye. Itafile yethu ye-oki ke ngoko inemilinganiselo ye-2.80x1.10m. Amagumbi okulala kumgangatho wokuqala mancinci kwaye athambile. Siye salungisa igumbi leTV kwigumbi elingaphantsi elinomabonakude omkhulu. Kodwa akufanele kube yimbindi yendlu ukuze ukwazi ukuphumla. Ukuba umntu ufuna ukubukela umabonwakude, akakhathazi mntu kusapho lwakhe okanye kubahlobo. Kumgangatho ongaphantsi kukho igumbi lentenetya letafile eliphangaleleyo elinetafile entle yetafile. I-attic eguquliweyo ikumema kwisifundo se-yoga sasekuseni, ukucamngca, iisemina ngokwamaqela kwaye yindawo yokudlala yabantwana efanelekileyo kwimozulu embi.
Indawo ejikeleze iLake Starnberg intle. Kukho iindawo zokutyela ezinkulu, iigadi zebhiya, iindawo zokutyela ezingqonge ichibi nakwindawo ekufutshane. IMyuziyam yaseBuchheim yimizuzu elishumi xa uhamba. Sibeka iingcebiso kunye neengcebiso kwifolda endlwini.
Ngelishwa, asikho kwindawo, kodwa mhlawumbi siya kuqhelana xa isithuthi sinikezelwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Seeshaupt